Umxholo waseDatshi, ukubonakaliswa kweLatin American-Geofumadas
Umxholo waseDatshi, ukubonakaliswa kweLatin American
NgoNovemba, 2011 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa, Uhambo
I-Netherlands isengongoma yenkcazo yeziganeko ezininzi kwicandelo letheknoloji, kodwa ngaphambi kokuba ndizibethe kwiimeko ezithile ezenza ndive ngathi ndibhala amaxesha okugqibela ehambo lwam Ndifuna ukukhulula iprozi enesazela ukuba iiyure ezinde zilindele indiza kunokubuyela umva, kubiza ngaphezulu kuba ukujika komhlaba kungcatsha inqwelomoya. Kwaye ngenxa yokuba kwigumbi eliphezulu andizokwazi ukubhala kuba iphupha alazi nokuba uze okanye uhambe xa uphakathi, ngelixa eAmsterdam ngu5 emva kwemini, eHouston ngu-10 kusasa; Wongeze isigqebelo esincinci sokuhamba nge-10 kusasa xa indawo ekuyiwa kuyo ibingo-3 kusasa. Ukudideka okukhulu kwedatha eluhlaza kwi-GPS esiyiphethe ngaphakathi.
Ndiza kulikhupha eli nqaku ngento engaphezulu kwenjongo ephindwe kabini, nangona ubuninzi bokwazisa kuba ndicinga ukuba kuya kubakho abakweli cala abangazi nto malunga neHolland: ukuba kukho iHague apho bagweba khona iingxaki zethu zamanye amazwe, ukuba inkcubeko yayo igcina ii icon ezingathandabuzekiyo ezinjengezihlangu ezivela iinkuni kunye neefestile zayo. Abanye abalandeli bembali ngekhe bazi ukuba uRuud Gullit wadlala kwiwotshi yewotshi kwaye ngaphezulu komnye umamele umkhwa wakhe wokunyamezelana, oxelelwe gwenxa ngabafundi abatshintshisanayo ababuyisa ubuncinci izizathu ezithathu zokuba kutheni beza kuyokwenza idigri ye-master yabo :
Kwiimyuziyam ezintle, Phakathi kwabo i-museum ye-Heineken yeroriyamu, isiselo esiphunga njengokungathi samanzi, kubandakanywa nokunconywa kwezonyango zeiglasi ze-8 zemihla ngemihla kwimpilo.
Ukubonisa ukukhanya kwebusuku, kubandakanya ezibomvu kwiindawo zoonongogo, kunye namantombazana kwiifestile, umsebenzi osemthethweni. Iphulo leofisi labakhenkethi licebisa ukuba ukuba uye waya eHolland kwaye awuzange uyisebenzise into eyivelisayo, kungcono ungatsho ukuba uyile.
Ukulungeleka kwekhofi, rhoqo rhoqo e-Amsterdam, apho bakhonza ikhofi kunye ne-marijuana piqué, ekwadliwe ngokusemthethweni.
Kodwa ukufumana umbono wombono waseDatshi kuthatha ngaphezulu kokundwendwela kweendawo zokusila zembali, amasimi e-tulip eneentyatyambo okanye ngoku amasimi emimoya e-windmill akuyo yonke indawo. Ke ukunqanda ukuba lula, ndiyabona ukuba le yimbono yam kwimbono ethile; embindini wekofu ... ukuba abavumelani, wonke umntu uya phaya ayokuzijonga ngokwakhe.
Amaphephandaba alapho kanye, ukuze umntu odlulayo ajonge izihloko eziphambili; Kwaye nangona kungekho nto ifanele iboyikise, bayaziphikisa kwihlazo laseBerlusconi. Bathetha ukuba oo-x abathathu kwiflegi esemthethweni banokubonisa ukunyamezelana kwabo neendlela zobomi, ezicacileyo ziyangqubana nomxholo wethu, nangona sisazi ukuba ubuzali obungakhathaliyo, urhwaphilizo kunye nokungalingani kwezentlalo zizenzo kwindawo yethu ezithi zamkelwe njengezisemthethweni; bakujonga njalo nangendlela ekubhekiswa ngayo kuthi.
Nangona kunjalo, nangona phantse bonqulo bebhengeza ukungacaluli ngokobuhlanga, abayenzi ngokwenkcubeko. Abakhathali malunga nokuziqhelanisa nokwabelana ngesondo okwenziwa ngunyana wabo, kodwa ukuba akayokudibana nabantu baseMorocco emva kwesikolo. Ke kunokwenzeka ukuba uve amabinzana anje:
-Andinguye owobuhlanga, kodwa ndiyazoyika iiPolisi kwaye andinakuma amaMoroccans ...
-Abantwana, asikho ubuhlanga, kodwa asibamkeli kuba benza umonakalo kuluntu lwethu ...
Yiyo ke le nto singabantu. Zahluke kakhulu njengeendawo ze-UTM ezitshintsha indawo, iiprototypes zethu ngokubhekisele kwindlela ekufuneka lusebenze ngayo usapho, ubudlelwane bezentlalo okanye umoya wophuculo zahlukile. Ngokuqinisekileyo ngaphezu kweyodwa kufuneka ndijonge i-corny ukuzonwabisa nabantwana bam kwisitayela saseMesoamerican, ngoku ngoku okokuqala ndibonisa egeomate.com kubaphulaphuli abangathethi baseSpeyin.
Mhlawumbi apho sahluke kakhulu khona kukubonisa uthando losapho, ubudlelwane babo bosapho buyabanda, hayi kuba bubi, kodwa kungenxa yokuba yenye indawo. Sikwabona ezinye zezi kwamanye amazwe ethu, kodwa ayisiyiyo eyesiqhelo. Isidanga semasters yesibini okanye isidingo sokwenza imali singenabuntu bokuba abantwana bazalwe, apha siyazisola ngokuba intombi yethu eneminyaka engama-26 iyatshata, apho bangxamele ukuba ahambe ngokukhawuleza.
-Uyazi intombi yam engcono kakhulu: sebenzisa ikhondom, andinomdla kwishishini lakho, nje kuphela ukuba ungenise i-monkey apha phambi kwesihloko.
Nangona benditshilo ekuqaleni, awuyiboni kuhambo olufutshane lweentsuku ezine xa ungenalo ixesha lokuhamba uyokuhamba epakini (nolonwabo lwayo), kodwa apho ngaphandle kwamadada kuqubha emanzini abandayo ubona kuphela amagqabi ansundu awela emithini kwaye abantu abadala bahamba nenja eyenziwe isitayile, bayadikwa kwedwa nakwimpesheni ...
Akunabantwana, ukuba abazange babale, asibabala ngokuba basabuyela umyalezo. Ngoko gcina iliso kwinja, kuba ngokuqinisekileyo yindlalifa kuphela.
Ewe imithetho yokunyaniseka isitayile sakhe, kufanelekile. Ukuba unyana wakho wayesebenza kwivenkile yokutyela kwaye umphathi wakhe akambhatali kuba eneengxaki kwaye uyabhanga, nge-80 yeeyuro awumhambisi kwinkundla yamatyala, kodwa uyokutya kwindawo yokutyela nosapho lwakho kwaye awuyibhatali indoda ... Ukuphikisa ukuba uyakuyenza kwiinyanga ezimbalwa, xa ndihlawula unyana wakho. Abantwana bakwabuyisa ukuthembeka, phantse ngokufanayo kodwa hayi ngengqondo efanayo; Ingcamango yethu yekhaya lokunakekelwa ngabantu asebekhulile abashiywe kwiidolophu zethu zaseSpain, bezama ukuthengisa ubugcisa ngokusebenzisa i-mesh ejongene noohola wendlela kawonkewonke, njengokuba kunjalo, kunye nokwahlukana nokuba banobomi benkathalo kunye nemali urhulumente kufuneka abuyele kubo. ukwenza igalelo ngelixa unegalelo eluntwini ... kuyathandabuzeka kuthi, kodwa kukhethwa xa sikhumbula ukuba uninzi lwabantu bethu abaphila ixesha elide batyiwa zizifo ezintsonkothileyo, bebodwa, bekhathalela abazukulwana kwaye ngaphandle kweemeko eziyimfuneko esingenako ukubabonelela ngazo.
Ndiyayeka ukucacisa ukuba andikhethi bala lamaDatshi, okanye amasiko ethu aseSpanish. Ndibeka kuphela imizekelo yomahluko kumxholo.
Kodwa ubuhlobo ekufudumaleni kwekofu elungileyo bumnandi, ukuphinda sidibane eLeidseplein isibini sabantu belizwe esiqhelaniswe naloo meko emva kweminyaka eli-18 sinika umdla. Nangona besamkela loo nkcubeko bayayamkela into yokuba abasayi kubuyela kweli lizwe le- #% @ # 9… (ulwaphulo-mthetho), ngenxa yesiko elinye laseYurophu lokufunda kuphela iintloko; nangaphezulu ukuba umshicileli wethu awunamfundo kwaye uphila kwiindaba zetheyibhuli zolwaphulo-mthetho olucwangcisiweyo kunye nokwaphulwa kwamalungelo oluntu, kongezwe kwiinzame ezimbalwa zezopolitiko zethu ezivela kwi #% @ # 9 ... (ayizizo zonke kodwa phantse zonke) ukwenza izinto ezizinzileyo. okanye ubuncinci banike umfanekiso ongcono xa bengabathunywa apho.
Emazantsi abo bafana nathi, bantu. Iyancomeka iodolo abanayo ngokubambelela kwimithetho ebathathe iminyaka ukuyakha, njengenkqubo yendlela yaseAmsterdam, nothungelwano olunzima lwemetro, izithuthi zabucala, iindlela zabahambi ngebhayisikile, oololiwe kunye neendlela zamanzi. Inkxalabo yabo iyafana neyethu, kodwa ngobungqina obahlukeneyo: akukho mntu uqhayisa ngathi malunga neloli enkulu, ethi kwezinye iindawo ezigabadeleyo yaziwa njengelitestamente lesithathu. Hayi, basebenzisa imoto edibeneyo, kubantu abadala isikebhe (ukuhla) kunye nokuphakama kwesithuthuthu: nangona eyona nto ibalulekileyo yibhayisikile. Ixabiso alinamsebenzi, ewe, ngesiqwenga senqwanqwa esinexabiso elingaphezulu kwelo linye, ukuba awufuni ukuba ibiwe kwaye iphela ilahliwe kwisitishi.
Umbutho ulungile ngeendlela ezininzi, nangona kunjalo, bayafana nathi, abaphulukani nobuxoki: Uyazicaphukela izibonda kuba zinxulunyaniswa nolwaphulo-mthetho, kodwa uyayamkela into yokuba umtshana wakho uza kukufumanela ii-Euro ezingama-15 ezinye zeefowuni ze-iPhone ezixabisa ama-60 evenkileni. Banokukuqhwabela izandla ubuqili bakho kwaye bakunyamezele ukungawuchazi umthombo njengenxalenye yemfihlo yakho.
Akukho bubi obucacileyo, kodwa kulungile kangangokuba isipaji sakho sinokutsalwa kwirosi ecwangciswe kakuhle. Awuyixeli ngenxa yelahleko yengozi, egqithileyo kuthi ukuba ngokuthengisa iziyobisi kunye nolwaphulo-mthetho oluhleliweyo sinesikhalo esibhakabhakeni. Apho unokuhamba iiyure kunye ne-iPad yakho ngesandla kwaye ngokubanzi abantu abanakukukhathaza, kuba ixesha nomthetho zibenze bavuthwa. Amaqhinga akwelinye inqanaba; Bayawoyika umthetho kuba bayazi ukuba ukuchama esitalatweni kunokubabiza i-200 Euro, kodwa bakube bebanjiwe banokwenza ubomi bokupeyinta emapoliseni ngobusuku obunye. Cela amanzi kunogada yonke imizuzu emi-5, ukuba uyawala, angaya entolongweni inyanga; xa unogada ediniwe umxelele ukuba ufuna ukuchama, ukuba umlindi akakhawulezisi uchamela ngaphakathi kwaye ngoku akazukukhusela inkundla kuphela ngenxa yokungakhathali kodwa uzokucoca nokungcola. Kwaye xa usenkundleni, ingomso olandelayo ...
Sir uMgwebi, mna ndibe ngummi onyanisekileyo, andiyi musa ukulimaza, ndiyazisola walimisa ukungathethi ke andiyi Ndikulungele ahlawule 200 Euro, kuba ndicinga ukuba oko bekuya kuba iiyure 32 luncedo ngakumbi ixesha lam ngokukhonza abantu abasweleyo esibhedlele .
Ke ewe, ubudala, izohlwayo, kunye noqeqesho lwamaziko zenza abantu bahloniphe umthetho. Nangona usenokubona umntu ekhwele ibhayisekile ngesandla esinye athethe efowunini nesinye, okanye intombazana enenja yayo ebhasikithini engaphambili eyenza nje intshukumo embi kwaye ibambe umsila wayo ubotshelelwe kwizithethi zetayara elingaphambili kutyumke embindini wesiphithiphithi sendlela.
Yile ndlela thina bantu esihluke ngayo. Olu luphawu endinalo ngabo, esitratweni yonke into iyangxama, uloliwe, indlela engaphantsi, iteksi, iminyaka, yonke into.
Ngaphandle kwekhefi, apho ixesha limile ngokungummangaliso. Akukho mntu unomnqweno wokuphelisa incoko. Akukho namnye. Ukuya kwinqanaba lokuba ndikwazi ukufumana ikofu, isandwich engaqhelekanga enamaqanda, bhala inqaku lam kwaye kanye xa bendishiya umlungiseleli wabona isikhombi sam, emva kokwenza iinzame ezimbalwa ezinyanzelekileyo wakwazi ukubhengeza nokutolika.
Kwaye wandibiza enye ikhofi, intlonipho yendlu.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iikholeji zeNgcaciso ze-AutoCAD - Ukusuka kwi-Data Station
Post Next Abaphumeleleyo be-7 Natural WondersOkulandelayo »
2 Iphendula "umxholo weDatshi, ukubonakaliswa kweLatin American"
Ndwendwela i-consulate yaseDutch ezweni lakho.
i-yessie okanye i-weber uthi:
Ukuba ungandinceda, ndinguColombian, utat'omkhulu wayengumDatshi, ndifuna ukudibana nosapho lwam kwelo lizwe
ndingenza njani ukufumana ukhathalelo olungelulo lwe-Iran
Ndingathanda ukuba undincede